Ihe omuma ahia ahia gi zuru ezu | Martech Zone
Textbroker etinyela ọnụ ihe omuma a Usoro 5 iji nweta Ọdịnaya Ọdịnaya Na-aga nke Ọma. Akụkụ ise bụ:
Oditi na Nyocha
Nkọwa Mgbaru Ọsọ
Mmepe na atụmatụ
Ihe okike na akuku
Nlekota na Contchịkwa
Ọ bụrụ na m ga-afanyekwa ihe ọ bụla, ọ ga-adị Promotion. Ọ bụ ezie na ịgha mkpụrụ na ndị na-eme ihe ike na-enye aka, akwụ ụgwọ nkwalite ọdịnaya site na mgbasa ozi mmekọrịta, mgbasa ozi nke obodo, na ịkwụ ụgwọ-pịa-bụ atụmatụ dị ịtụnanya. Dịka, anyị na-amalite nkwalite mgbe anyị gosipụtara na ọdịnaya ahụ na-emetụta ndị na-ege ntị ma na-akwọ ụgbọala na mgbanwe.
Ebumnuche dị ka iji ndị na - eme ihe ike - ịchọrọ ịkwalite ọdịnaya gị na ndị na - ege ntị dị mkpa ị na - erubeghị. Marketingzụ ahịa ndị nwere mmetụta nwere njedebe n'ihi na ndị na - eme ihe ike na - ewulite ntụkwasị obi na ikike ha na ndị na - ege ha ntị ka ị wee hụ ọnụego mgbanwe ka mma na ha - mana nke ahụ ekwesịghị igbochi gị ịkwalite nkwalite ụgwọ.
Ekele diri ndi edemede a. Anyị ka na-azụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na nke ha mmepụta atụmatụ. Were ya na ị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe wijetị. You ga-anọgide na-emepụta wijetị ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-azụ ha? Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ ji na-aga n'ihu na-ewepụta ọdịnaya nke ọ nweghị onye na-etinye? Ha na-egbusi oge, ego, na ọbụnadị na-emebi ahịa ha karịa inyere ya aka.
Inwe usoro doro anya bụ ihe dị mkpa maka ịga nke ọma nke mgbasa ozi ahịa ọdịnaya ọ bụla. Nyere na mpaghara ahia ọdịnaya dị obere, agbanyeghị, ọ nweghị usoro omume ma ọ bụ usoro omume siri ike. Mara ihe ị ga-etinye na atụmatụ ọdịnaya, otu o kwesịrị isi rụọ ọrụ, otu esi etinye ihe niile ma ghọta ya - ndị a bụ ihe niile ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọpụta na usoro nnwale.
Complete Afọ Marketing Checklist
Tags: nyochainyocha ọdịnayaọdịnaya na-achịkwammepụta ihenkọwapụta ọdịnayammepe ọdịnayaebumnuche ọdịnayacontent Marketingnyochaa ọdịnaya ahịandenye ahia ahia ọdịnayaọdịnaya ahịa ahịa ọdịnayanlekota ọdịnayanhazi ọdịnayankpuru ọdịnayaTextbroker